I-Aquaponics: yintoni, izibonelelo, ukubaluleka kunye neeprojekthi zeshishini | Ngeentlanzi
IsiJamani sasePortillo | | Ukutya iintlanzi
La aquaponics Yinkqubo edibanisa iimpawu zenkcubeko yentlanzi kwindlela yemveli yokufuya iintlanzi nenkcubeko ye-hydroponic. Inkcubeko ye-hydroponic yenye yezityalo ezikhuliswa ngaphandle kwalo naluphi na uhlobo lwe-substrate. Amanzi anesixa esikhulu sezondlo ezichithakeleyo asetyenziselwa oku. Obu buchule bunceda ekuphuculeni imeko yezityalo neentlanzi.
Kweli nqaku siza kukuxelela ukuba yintoni i-aquaponics kunye nokuba zeziphi iimpawu zayo eziphambili.
1 Yintoni i-aquaponics
3 Yintoni efunekayo ukwenza i-aquaponics
4 Uyenza njani i-aquaponics ekhaya
6 Iiprojekthi zamashishini aquaponics
Yinkqubo ezinzileyo ekwaziyo ukuvelisa ngaxeshanye zombini izityalo kunye nentlanzi. Ukudibanisa iimpawu zenkcubeko yaselwandle kunye nenkcubeko ye-hydroponic. Ezi zinto zimbini zibalulekile ukuze sikwazi ukukhulisa izilwanyana zasemanzini kunye nokukhulisa izityalo. Inkunkuma evela ekufuyeni iintlanzi inokuqokelelana emanzini kwaye isebenzise iinkqubo ezivaliweyo ezinokuphinda ziphindaphinde iinkqubo zemveli zasemanzini.
Nangona amanzi atyebileyo anokuba yityhefu kwizilwanyana ezithile, ayinakuphikwa ukuba yinxalenye ebalulekileyo yokukhula kwezityalo. Kungenxa yokuba amanzi amdaka atyebile kwizakhamzimba izityalo ekufuneka zikwazi ukukhula kakuhle.
I-Aquaponics isebenza ngezinto ezahlukeneyo okanye iinkqubo ezingaphantsi. Masibone ukuba ziziphi izinto ezisekwe kulo mkhuba:
Itanki yokuzala: yindawo apho iintlanzi zitya kwaye zikhule khona. njengendawo yokuhlala encinci yokuphuhla kwayo.
Ukususwa okuqinileyo: Iyunithi esetyenziselwa ukuphelisa ukutya okugonywe yintlanzi kunye neqela lezona zidalwa zigqwesileyo. Apha i-biofilm ihlala idalwa ngaphezulu kwamanzi.
Icebo lokucoca ulweloNjengakuyo yonke indawo enamanzi, iibacteria ze nitrification ziyafuneka. Ezi bhaktheriya zinoxanduva lokuguqula i-ammonia ibe ziitrate ezihambelana nezityalo.
Inkqubo esezantsi yeHydroponic: yinxalenye yenkqubo yonke apho izityalo zinokukhula ngokufunxa izondlo ezisuka emanzini. Kule meko akukho luhlobo lwe-substrate. Ngamanzi anesondlo enza ukuba isityalo sikwazi ukukhula.
Isishwankathelo: lelona candelo lisezantsi layo nayiphi na inkqubo ye-hydroponic. Le yinxalenye apho amanzi ahamba khona aze empontshelwe emva kwiitanki zokukhulisa.
Yintoni efunekayo ukwenza i-aquaponics
Ukuze ukwazi ukwenza i-aquaponics udinga into ebaluleke kakhulu. Konke malunga ne-nitrification. I-Nitrification kukuguqulwa kwe-aerobic ye-ammonia ukuya kwiitrate. IiNitrate ngabo banoxanduva lokunciphisa ityhefu yamanzi eentlanzi. Ukongeza, ii-nitrate ezisiphumo zisuswa sisityalo kwaye zisetyenziselwa isondlo sayo. Iintlanzi zihlala zikhupha i-ammonia njengemveliso ye-metabolism.
Uninzi lwale ammonia kufuneka lucocwe, kuba ubuninzi bayo bunokubulala iintlanzi. Oku kwenza ukuba i-aquaponics isebenzise amandla eentsholongwane ukuze ikwazi ukuwaguqula abe ngamanye amacandelo e-nitrogen.
Ukwenza i-aquaponics udinga inkqubo ye-aquaponic eyenziwe ngokulandelelana ziinkqubo ezimbini ezisekelayo. Zezi:
Ukulima izityalo kwi-hydroponics.
Ukufuya iintlanzi kwitanki leentlanzi kusetyenziswa i-aquaculture.
Uyenza njani i-aquaponics ekhaya
Baninzi abantu abafuna ukwenza i-aquaponics ekhaya. Kuya kufuneka bazi ukuba bafuna izinto eziyimfuneko ukuze bayiphumeze. Ezi zinto zilandelayo:
Iitanki ezimbini zamanzi
Into yokuqala kukubeka itanki kwitafile yokukhula. Unokwenza umngxunya olingana nesiphon sanitary kwaye singayibeka phakathi kwetafile kunye netanki. Itanki kufuneka ibekwe phantsi kwe-aquarium kwaye sibeka impompo yamanzi eya kunyuka iye kwindawo apho izityalo ziya kubekwa khona. Emva koko, sibeka ityhubhu enemingxunya ukukhusela i-siphon kwilitye lodongwe. Udongwe kufuneka luhlanjwe.
Sibeka isityalo embizeni yodongwe size siyigcwalise ngamanzi ukuze siqale ukucoca. Iintlanzi aziyi kubekwa malunga neeveki ezintathu, xa le nkqubo sele iqhuba kwaye kukho ikholoni yebhaktiriya. Masingakulibali ukuba ibhaktiriya inoxanduva lokuguqula i-ammonia, imveliso yenkunkuma yentlanzi ngenxa yemetabolism yayo, ibe yitrate esetyenziswa sisityalo njengezondlo. Olu ke ngumlinganiso oqhubekayo ekufuneka i-aquaponics ube nawo.
Njengoko kunokulindelwa, lo mkhuba unentswelo enkulu, uqoqosho kunye nezibonelelo zemveliso. Makhe sihlalutye ukuba zeziphi izibonelelo ze-aquaponics.
Isivuno siphezulu kulimo lwe-hydroponic kwaye oko kubonelelwe yinkcubeko yaselwandle. Ukuze lo msebenzi ube phezulu, kufuneka uzinze kuqala.
Akukho lungcoliseko luyintsalela lwalo naluphi na uhlobo. Ukongeza, ukusetyenziswa kwamanzi kuncinci ukuba sikuthelekisa nezinye iinkqubo zezolimo. Oku kungenxa yenkqubo yayo yokujikeleza kwakhona. I-Tan iyakwazi ukuzalisa amanzi alahlekileyo ngomphunga.
Akukho mfuneko yokusebenzisa izisombululo zezinongo njenge-hydroponics. Kananjalo akufuneki ungcolise okanye usebenzise izichumisi ezibiza kakhulu njengezolimo eziqhelekileyo. Kuxhomekeka kwezinye iindidi zokwakheka kwamanzi kwiindawo ezithile, kuyimfuneko ukongeza izinto zomnquma ezifana nentsimbi, ikhalsiyam kunye ne potassium. Inkqubo ngamanye amaxesha ayizivelisi ngokuzimeleyo ezi zinto zilanda umkhondo ngobungakanani obaneleyo.
Iintlanzi eziveliswayo zisempilweni Ngaphezu kwezo zikhuliswe kwi-aquaculture kwaye umthamo wemveliso uphezulu. Akukho mfuneko yakuphatha inkunkuma yentlanzi njengakwezinye iinkqubo zemveli zokufuya iintlanzi Nokuba bagxothiwe elwandle okanye kwiindlela zamanzi amatsha kwaye kuthintela ukoyikiswa kwamanzi.
Singavelisa imifuno kunye neentlanzi ezikumgangatho ophezulu kwindawo enye.
Inenkani enkulu kwizitshabalalisi nakwizifo.
Iiprojekthi zamashishini aquaponics
Eyona projekthi inkulu ye-aquaponics yemizi-mveliso yenzeka China. Ineehektare ezingaphezu kwe-4 kwaye isebenzisa itekhnoloji entsha ngokudibanisa ne-bamboo endala. Isetyenziselwa ukusebenzisa amalinge okulima irayisi kumachibi eentlanzi kunye nokubonelela ngesiseko sokukhulisa zonke izityalo zomhlaba. Kukwakho nelinge lokufumana kwakhona izondlo emhlabeni.
Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi ungafunda ngakumbi malunga ne-aquaponics.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Ukutya iintlanzi » I-Aquaponics
Iintlanzi ziyakwazi ukunxibelelana